फिफाको नयाँ वरियता : नेपाल ३ स्थान झर्‍यो, बेल्जियम शीर्ष स्थानमै - सबै खेल
मड्रिड डर्बीमा बेन्जिमा उपलब्ध हुन सक्ने !
बी डिभिजन लिगः मध्यपुरको पहिलो जित, सातदोबाटोेले खुमलटारलाई हरायो
युसुफ र वियनले लिए क्रिकेटबाट सन्न्यास
युरोपा लिग अन्तिम १६को ड्र सार्वजनिक, युनाइटेडले पायो एसी मिलानलाई प्रतिद्वन्द्वी
मिलान र रोमा अन्तिम १६मा, नापोली बाहिरियो
फुटबल राष्ट्रिय समाचार
फिफाको नयाँ वरियता : नेपाल ३ स्थान झर्‍यो, बेल्जियम शीर्ष स्थानमै
१२ मंसिर २०७६, बिहीबार १६:४० November 28, 20190Comments FIFA Ranking
विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)ले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपाल तीन स्थान तल झरेको छ । यसअघि १६७औं स्थानमा रहेको नेपाल ३ स्थान झर्दै १७०औं स्थानमा आइपुगेको छ ।
विश्वकप छनोटमा लगातार खराब प्रदर्शन गरेपछि नेपालको फिफा वरियता ओरालो लागिरहेको छ । विश्वकप छनोटमै भुटानमा २ साताअघि मात्र नेपाल कुवेतसँग १–०ले पारजित भएको थियो । विश्वकप छनोटमा पनि यसअघि भएका ४ मध्ये ३ खेलमा नेपाल फराकिलो अन्तरले पारजित भएको थियो ।
दक्षिण एसियामा नेपाल तेस्रो स्थानमा आइपुगेको छ । नेपालमा भन्दामाथि भारत (१०८) र माल्दिभ्स (१५५) छन् । यस्तै, नेपाल भन्दा तल बंगलादेश (१८७), भुटान (१८९), पकिस्तान (२०१) र श्रीलंका (२०५) छन् ।
युरोकप छनोटमा लगातार १० खेल जितेको बेल्जियम फिफा वरियतामा शीर्ष स्थानमा यथावत छ । नयाँ वरियता १० मा कुनै फेरबदल भएको थियो । फ्रान्स, ब्राजिल, इंग्ल्यान्ड र उरुग्वे क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाचौं स्थानमा छन् ।
यस्तै, क्रोएसिया १ स्थान उक्लँदै छैठौं स्थानमा रहँदा पोर्चुगल १ स्थान झर्दै सातौं स्थानमा आएको छ । स्पेन आठौं, अर्जेन्टिना नवौं र कोलम्बिया १०औं स्थानमा छ । २ स्थानमा माथि उक्लँदै इटाली १३औं स्थानमा आउँदा २ स्थान नै झरेको नदेरल्यान्ड्स १४औं स्थानमा आएको छ ।
फिफाको नयाँ वरियतामा म्यानमारले सर्वाधिक ११ स्थान सुधार गरेको छ । म्यानमार अहिले १३६औं स्थानमा छ । यता, निकारागुवा सार्वधिक १३ स्थान तल झरेको छ । ऊ अहिले १५०औं स्थानमा आएको छ ।
← लिभरपुल नकआउट नजिक, चेल्सी ‘डेन्जर जोन’मै
भारत सहभागी नहुँदा साग फुटबलको तालिका परिवर्तन →
स्मिथ र वार्नर कहिले फर्कन्छन् अस्ट्रेलियन टिममा ?
२४ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार १७:२५ 0
इंग्ल्यान्डसामु अफगानिस्तान निरीह
१४ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ००:०४ 0
नाडाल फ्रेन्च ओपनको फाइनलमा
२३ आश्विन २०७७, शुक्रबार २३:०० 0
१४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार २१:३० 0
एकसाता अघि ट्रेनिङका क्रममा घाइते भएका रियल मड्रिडका फ्रेन्च स्ट्राइकर ‘मड्रिड डर्बी’मा उपलब्ध हुने सक्ने भएका छन्। चोटकै कारण बेन्जिमा
१४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार २१:१२ 0
१४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार २१:०९ 0
१४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १८:५१ 0
१४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०९:५४ 0